Shaqo banaan Dubai oo loogu tala galay Hindiya - Codso kooxda!
Shaqo banaan Dubai oo loogu talo galay Hindida
مشاغل در دبی-ما در حال جديد قدیم!
Dubaj Zjednoczone Emirati Arabskie Si aad nadal raj podatkowy!
Published by Shirkadda Dubai City at November 13, 2018
Shaqooyinka banaan ee Dubai waayo, Indian la Shirkadda Dubai City. Tusmooyinkayaga shaqaalaynta ayaa caawinaya shaqo doonka Hindida. Ujeedadayadu waa inaan ka caawino sidii ay u gaari lahaayeen suuqa shaqada. Dubai City Company si guul leh u meeleeyay kumanaan shaqo doon ah. Anaguna waan naqaanaa sida loo caawiyo. Gaar ahaan sida loogu guuro dalka Isutagga Imaaraatka Emirates. Shaqooyinka banaan ee Dubai ama Abu Dhabi. Waxaa si balaadhan loogu furay maamulayaasha India iyo ardayda hada qalin jabisay. Marka, si kasta oo ay tahay khibradaadu. Waad awoodaa shaqo ka dalbo Emirates.
Xaqiiqdiina, waad ku qaban kartaa annaga kooxda takhasuska leh. Iyo annaga HR maareeyayaasha wuxuu ku hagaajin doonaa shaqo dibedda ah. Marka walwalkaaga kaliya ayaa noqon doona, sababta aanan horey u helin websaydhkaan ?. Marka, Guud ahaan ka hadal, iskuday ka hel inta ugu badan ee aad ka hesho goobta shaqada. Tanna iyada oo tan maskaxda lagu hayo, eegno annaga blog. Ka dib codso liiska shaqaaleynta iyo xariirka shaqaalaha. Oo waxaan rajo ku qabnaa waxaad ka heli doontaa qodobbada xiisaha leh iyo dhiirrigelinta.
Marka, haddii aad raadineysid Shaqo ka raadinta Dubai sida qof Hindi ah, waa inaad ka diiwaan gelisaa astaantaada shirkaddeena. Kadib soo hel dad badan oo aad la xiriirto oo aad kala hadashid waxa ku saabsan United Arab Emirates. Guud ahaan hadalka, sida ugu wanaagsan ee qof Hindi ah waa inaad ku xirnaato Hindida kale. Tanina waxay kaa caawin doontaa inaad guul weyn ka gaarto gudaha khibradahaaga nololeed ee qurbaha.
Riix sawirka si aad u bilowdo shirkadda Dubai
Shirkadda Dubai City hadda iyagoo siinaya hage wanaagsan & qaybo macluumaad oo ku saabsan Shaqaalaynta Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Marka, iyada oo tan maskaxda lagu hayo, waxaad hadda heli kartaa tilmaamo, talooyin iyo shaqo ka helay Imaaraadka Carabta oo leh luqaddaada.